विविध Archives - Page3of 96 - Purbeli News
काठमाडौं / अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै हुने भएको छ । संसद् बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल हुँदा सांसदहरूबीच सामान्य छलफल मात्र हुने सहमति भएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले आजको संसद् बैठकमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल मा...
काठमाडौं / हृदयेश त्रिपाठी समूह अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिएर त्रिपाठी समूहले पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । त्रिपाठीको अध्यक्षतामा जनप्रगतिशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । सो पार्टीसँग अहिले दुई सांसद छन् । ‘बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी माग गरेका हौं । त्य...
साथीका दाजुले निद्राको औषधि ख्वाएर बलात्कार गरे : बहिनीले दाजुलाई साथ दिइ, अदालतबाट सफाइ
काठमाडौं । कुमारी आमाको नामले चिनिने महोत्तरीकी निहारिका राजपूतले आफूमाथि भएको बलात्कार मुद्दामा अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । आज रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपूतले आफूलाई बलात्कार गर्ने धनुषाका शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएर आफूमाथि अदालतले अन्याय गरेको दुखेसो पोख्नुभयो । निहारिका राजपूतले राज्यले आफूलाई न्य...
प्रश्नकर्ताः म आफ्नो तीव्र यौन चाहनाहरूबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु ? सद्गुरुको जवाफ : हामी सदैव कुनै कुराबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ । तपाईं कुनै पनि कुराबाट जबर्जस्ती छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न । यदि तपाईंले कुनै कुरालाई जबर्जस्ती त्याग्न खोज्नुभयो भने, त्यो अर्को रूपमा प्रस्तुत हुनेछ अनि तपाईंभित्र अर्को किसिमको विकार उत्पन्न...
काठमाडौं / भनिन्छ, कसैको मायामा डुबेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मेक्सिकोबाट आएको छ । त्यहाँ एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकाकी आमाको ज्यान बचाउन मिर्गौला दान गरेका छन् । त्यसपछि बदलामा उनले आफ्नी प्रेमिकाबाट जीवनभरको साथ र माया पाउनुपर्ने हो । तर त्यसो भएन । आमाको उपचारपछि युवतीले अर्कैसँग बिहे गरिन् । जानकारी अनुसार प्रेममा धोक...
जुम्ल्याहालाई चिन्दैन ई-पासपोर्टको सफ्टवेयर, सिस्टमले बारम्बार आवेदन रद्द गरिदिएपछि तनाव
काठमाडौं / यही मङ्गसिरदेखि नेपाल सरकारले ई-पासपोर्ट अर्थात विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याएको छ । यससँगै सरकारले सेवाग्राहीको सहजताको लागि भनेर अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । राहदानी विभागको केन्द्रिय कार्यालय लगायत ३१ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाल राहदानीको वितरणको काम भइरहेको छ । सबै काम घरमै बसेरै गर्न सकिने अनि कार्यालय धाउन...
नयाँ दिल्ली / कोभिड १९ का कारण अहिले मानिसहरुले धमाधम विवाह रद्द गरिरहेका छन् । तर, भारतको एउटा जोडी भने नितान्तै नौलो ढंंगले वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने घोषणा गरेको छ । तमिल नाडुका दिनेश शिवकुमार पद्मावती र जनगननधिनी रामाश्वामी मेटाभर्सका माध्यमबाट विवाह गर्न लागेका हुन् । महामारी बढेपछि राज्य सरकारले सरकारले बढीमा १०० जनालाई मात्र विवाहमा सहभागी...
आवाजकै आधारमा जल गैंडाले छुट्याउन सक्छन् साथी र शत्रु
पेरिस / एउटा अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो भने जल गैंडाले आवाजका आधारमा आफ्ना साथी र शत्रुलाई छुट्याउन सक्छन् । जल गैंडाको बारेमा अफ्रिकाको प्राकृतिक आरक्षणमा अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिकहरुको एउटा समूहले यस्तो निस्कर्ष निकालेको हो । अनुसन्धानका नेता तथा फ्रान्सस्थित युनिभर्सिटी अफ सेन्ट इट्नीका प्राध्यापक निकोलस म्याथेभोनका अनुसार उसको अनौठो आवाजकै ...
आँखालाई हेरेरै यसरी गर्न सकिन्छ मृत्युको भविष्यवाणी !
सिड्नी / के तपाईले कसैको मृत्युबारे भविष्यबाणी गर्नु भएको छ ? सर्वसाधारणका लागि निश्चिय पनि यो जटिल कार्य हो । तर, वैज्ञानिकहरुले भने मानिसको आँखा हेरेर उसको मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिने बताएका छन् । अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरुले एउटा नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कार्यक्रम बनाउन सफल गरेका छन्, जसका माध्यमबाट मानिसहरुको रेटिना हेरेर आय...
झापा : भद्रपुर नगरपालिका–५ घोडामारा निवासी १४ वर्षीया विपना लामा १६ दिनदेखि बेपत्ता भएकी छिन्।साथीको घरमा साग पुर्‍याउन भन्दै घरबाट हिँडेकी विपना बेपत्ता भएपछि उनका परिवारजनले खोजी गरिदिन प्रहरीमा निवेदन दिएका छन्। भद्रपुरस्थित वीरेन्द्र मावि चन्द्रगढीमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विपना पुस २१ गते घरबाट हिँडेको उनकी आमा बिन्दा लामाले बताइन्।साथी...